I-LG G8 ThinQ iya kuthengiswa eMelika ukusukela nge-Epreli 11 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-LG G8 ThinQ iya kuthengiswa e-United States ukusukela nge-Epreli 11: ii-odolo zangaphambili sele ziqalile
Abakwa-LG bazise ngokusesikweni ifayile ye- G8 ThinQ kwiNkomfa yeHlabathi yeHlabathi eBarcelona ngoFebruwari, kwaye ngoku inkampani iphantse yalungela ukuyizisa emnyango wakho, nangona useMelika, ekuqaleni. Usandula ukubhengeza ukuba ifowuni ephezulu yokusebenza iya kuba iyafumaneka ngo-Epreli 11.
Amaxabiso aya kuqala kwi- $ 819.99 ngokwazisa okwenyukayo ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola ixesha elinomda ekusungulweni. Abathengisi ngqo ababonelela ngesixhobo baya kunxibelelana neenkcukacha ezifanayo. Okungakumbi koku kungezantsi.
I-LG G8 ThinQ iya kufumaneka kwi-AT & T, Verizon, T-Mobile, Sprint, US Cellular, Xfinity Mobile, Best Buy, kunye ne-B & H. Uku-odola kwangaphambili kuvulwe nge-29 ka-Matshi.
I-LG G8 ThinQ ebomvu
Lindela ukuyibona kwiCarmine Red, iNew Aurora emnyama, kunye nokukhethwa kombala weGrey Platinum eNtsha, nangona ingengabo bonke abathwali kunye nabathengisi abaya kugcina zonke ezi zinto zahlukileyo.
Kufanelekile ukukhumbula oko i-G8 ThinQ iza ne-chipset Snapdragon 855, I-6 GB ye-RAM, i-128 GB yokugcina eyandisiweyo, iikhamera zangasemva ezimbini (umgangatho we-12 MP f / 1.5 + 16 MP ububanzi f / 1.9), i-8 MP (f / 1.7) ikhamera ye-selfie kunye nenzwa yekhamera ngaphambili njenge kakuhle (yeToF). Ifowuni isebenza kunye I-Android 9 Pie kwaye inebhetri yomthamo we-3,500 mAh, ehambelana nokutshaja ngokukhawuleza.
I-Huawei, i-Samsung kunye ne-LG, phakathi kweenkampani ezibhalise ezona zicelo zininzi ze-patent ngo-2018 [+ Usetyenziso]
Kwelinye icala, njengoko besele sichazile ngalo mzuzu wokuphehlelelwa, umenzi waseMzantsi Korea uhambise isithethi somzimba kwifowuni. Endaweni yoko kukho i-chip ye-Quad DAC engama-32-bit, ejongene nokudlulisa ukungcangcazela kwikristale ukuze ivakele kuyo. Oku, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona nto kuthethwa ngayo malunga nemodeli yolu hlobo. Nangona kunjalo, iya kuhlala ibonwa ukuba isebenza njani kunye nendlela abasebenzisi abasabela ngayo kule teknoloji intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-LG G8 ThinQ iya kuthengiswa e-United States ukusukela nge-Epreli 11: ii-odolo zangaphambili sele ziqalile
I-Cure Hunters yiplatifomu ebandakanyekayo enesitayile se-retro
UGoogle upapasha ingxelo yokhuseleko ye-Android ka-2018